Macallinkii hore ee Masar oo kula taliyey Mohamed Salah inuu ka tago kooxda Liverpool oo uu ku biiro… – Gool FM
(Cairo) 10 Maajo 2018. Macallinkii hore ee Masar, Hany Ramzy ayaa kula taliyey xiddiga kooxda Liverpool ee Mohamed Salah inuu isaga tago kooxdaas isla markaana uu ku biiro naadiga Real Madrid.
Los Blancos ayaa aad loola xiriirinayey inay u dhaqaaqo xiddiga hoggaaminaya gooldhalinta horyaalka Premier League, Ramzy kaasoo Salah ku soo maamulay xulka qaranka Masar sanadkii 2011 ayaa rumeysan inay tahay waqtigii ku habboonaa ee uu ku biiri lahaa kooxda reer Spain.
“Waxaan u malaynayaa inuu taariikh sameeyey ciyaaryahanka Masar, tanina waa mid aad muhiim u ah, sidoo kale adduunka oo dhan way arki karaan awoodda dabiiciga ah ee uu leeyahay ciyaaryahan Salah.” ayuu Ramzy u sheegay ESPN.
“Su’aasha ku saabsan haddii ay u wanaagsan tahay inuu joogo Liverpool ama inuu aado horyaalka kale, waxaana u malaynayaa Warbaahinta oo dhan inay hadal hayaan Real Madrid ama Barcelona, aniga ahaan, Salah waxa uu diyaar u yahay inuu tallaaban qaado, isaga ahaan waa waqtigiisii.”
“Waa waqtiga ku habboon ee uu aadi lahaa Real Madrid, gaar ahaan waxaan u malaynayaa in Real Madrid ay tahay sida ay u ciyaaraan inay noqon karto mid aad aad ugu wanaagsan u dhaqaaqista Salah, maxaa yeelay waxa uu wax walba ka sameynayaa xilli ciyaareedkan kooxda Liverpool.”
Salah, kaasoo 57 kulan u saftay xulka qaranka Egypt ayaa u dhaliyey 43 gool naadiga Reds xilli ciyaareedkan.
Kooxda ugu fiican Xilli ciyaareedka horyaalka Ligue 1 ee Waddanka Faransiiska oo la shaaciyey